Shaqaale ka tirsan Wasaaradaha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo tababar loogu diray Kenya – Radio Muqdisho
Shaqaale ka tirsan Wasaaradaha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo tababar loogu diray Kenya
Shaqaalahan tababarka loo diray oo gaaraya 30 shaqaale oo kala socday sagaal Wasaaradood oo dowladda federaalka ah iyo qaar ka mid ah Maamuul Goboleedyada dalka ayaa maanta u ambabaxay dalka Kenya, halaasi oo ay ku soo qaadan doonaan siminaar la xariir la qabsiga isbadalka Cimilada oo ay soo qaban qaabisay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ee dhanka Bii’ada.
Simaarkani ayaa waxaa maalgalinaya Hay’adda UNDP, aydoo cashirada lagu baxin doono Iskuulka Arrimaha Deeganka ee Wadanka Kenya, kaasi oo socon doono muddo 22 cisho ah.
Qaar ka mid ah Shaqaalaha tabaarkaasi loo diray ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay inay aad ugu faraxsanyihiin tababarkan ay heleen, waxaana ay intaa ku dareen in waxyaabaha ay ka soo faa’iideystaan siminaarka ay bulshadooda ugu adeegi doonaan.
Wasiiru Dowlaha Bii’adda ee Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Mudane Burci Maxmed Xamse ayaa shaqaalaha ku booriyay inay ka faa’iideystaan fursadda ay heystaan, isla markaana ay ilaaliyaan sharafka iyo sumcadda bulshada ay matalayaan.
Shaqaalahan ayaa looga fadhiyaa inay si habsami leh uga faa’iideystaan fursadda ay heystaan oo ah tababarka loo fidiyay.
Maamulka gobolka oo mamnuucay in boorarka marooyinka ah lagu xiro waddooyinka
Maamulka degmada Warta Nabadda oo dhiiri geliyay haween la barayo xirfado ay ku shaqeystaan “SAWIRRO”